Axmed Madoobe oo soo gabagabeeyay socdaalkiisa Boosaaso
BOOSAASO, Puntland - Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta garoonka diyaaradaha Boosaaso ka sagootiyey dhigiisa Jubbaland Axmed Madoobe iyo wafdi uu horkacayo oo maalmahan booqasho ku joogay Puntland.
Deni waxaa sagootinta ku weheliyey xubno ka tirsan goleyaasha Dowladda Puntland, maamulka Gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso, Saraakiisha laamaha ammaanka iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada.
Mudadii uu ku sugnaa xarunta gobolka Bari, Axmed Madoobe oo farxad ka muujiyey socdaalkiisa ayaa kormeer ku tegay xarumo dowladeed oo ay kamid tahay dekadda Boosaaso.
Sidoo kale, wuxuu kulamo la yeeshay Deni. Badi kulamadda waxaa lagu gorfeeyay xaalada guud ee dalka si gaar ah arrimaha masiiriga ah ee doorashooyinka, qabyo tirka dastuurka iyo ammaanka.
Axmed Madoobe iyo Deni ayaa kawada qeybgalay Shirka Iskaashiga Puntland iyo Jubaland oo laba casho socday, kaasoo lagu faaqidey arrimo dhowr ah, gabagabadana laga soo saarey war-murtiyeed.
Sidda ku xusan bayaanka, dhinacyadda ayaa isla meel-dhigay in aan la siyaasadeyn mashaariicda horumarinta, in la adkeeyo midnimada iyo in dowladda federaalka aysan dalka u diyaarin karin doorashooyin qof iyo cod ah.
Sidoo kale, waxay isla afgarteen in xukuumadda federaalka ay caqabad ku tahay hirgelinta nidaamka federaalka, in ay joojiso faragelinta arrimaha dowlad goboleedyadda, in ay sharci darro tahay xayiraada iyo xariga wasiir Janan.
Kormeerka labada madaxweyne oo ay ku wehliyeen xubno kale ayaa lagu sheegay khibrad wadaag.
Axmed Madoobe oo ku wajahan Puntland [Ujeedka Safarkiisa]
Soomaliya 05.01.2020. 17:17
Deni oo magacaabay Wasiiru-Dowleyaal iyo Wasiir Ku-xigeeno
Puntland 21.10.2019. 16:25
Karaash: Shaqooyinka ka socda Boosaaso waa kuwii ay xaqa u lahayd
Puntland 12.07.2019. 15:56
Qarax lala eegtay gaariga gudoomiyaha maxkamada Boosaaso
Puntland 11.05.2019. 10:19